Aagga Magaalada Dubai, meel aad u fiican oo aad ku booqato ama bilowdo ka shaqeynta UAE
Dhismaha Magaalada Dubai ????
Published by Shirkadda Dubai City at October 16, 2017
Aagga Magaalada Dubai
Dubai Soonayaasha Magaalada ayaa ah kuwa ugu yaabka badan meel Booqo ama shaqo?
Haddaba, Dubai City Aag leh meelo cajiib ah oo si fiican loogu yaqaanaa wax la yaab leh Sawirada Magaalada Dubai iyo mustaqbalkiisa run ahaantii. Tusaale ahaan, qof kasta oo u dhalatay wuu jeclaan lahaa shaqo raadso halkaas. Dhab ahaan, mustaqbalkiisa iyo boggaga shaqada ee Dubai hubaal waa cajiib. Firfircoonideena, waxa weeye, isku dayo inuu sharaxo sharraxaadda, qorista iyo codsiga shaqada ee fiisada booqashada ee Dubai.
Guud ahaan bil kasta Shaqaalaha Dalxiiska ee Dubai qaadashada maalmo ama toddobaadyo jahannamada marka ay samee shaqo raadin UAE. Ujeedada si aad u hesho tusaale ahaan shaqooyinka suuq-geynta suuqa Dubai oo mushahar ah magaalada. Si aad u dhigto si ka duwan, haddii aad tahay saaxiibkaa saaxiibka ah taasina waxay ahayd safarkaagii saddexaad ee tan Emirates. Waa inaan kuu sheegayaa bilowga hore way adag tahay inaad adeegsaneyso mooyee Kooxda WhatsApp.
Iyadoo fiiro gaar ah si loo caddeeyo in shirkadaha qorista ee Dubai waxay lacag u helayaan adeegga ay bixiyaan. Xaaladdan oo kale, wax badan oo aad u baahan tahay inaad ogaato, way ka raaxaystaan hay'adaha shaqada ee Dubai waad heli doontaa. Xirfadaha gaarka ah ee ka jira Bariga Dhexe ayaa qaadan doona xitaa dadaalka waqtiga xitaa horumarinta Dubai iyo shaqooyinka martigelinta.
Sidee loo aadaa Dubai shaqo?
Sida iska cad, habka ugu wanaagsan ee sahlan waa sahlan: Download app hadda! laga bilaabo website-ka rasmiga ah ee "Careers". Dhab ahaantii mustaqbalkiisa ee Dubai iyo aad cusub shaqo doon waxay ubaahantahay in si dhakhso ah loo helo raadinta oo u codsato shaqo muddo ka yar hal daqiiqo. Sababtoo ah labadaba, waxaad ku jiri doontaa saacado badan hel shirkadaha qorista ee UAE. Laga soo bilaabo Dawladda 35 + waxaad ka heli kartaa wax ka badan inta aad ka fekereyso.
Shaqooyinka Dubai waa tallaabada ugu horreysa ee aad ku guulaysato
Muhiim u ah inaad horay u aragto tag search waayo, goobaha shaqada Dubai Waa wax macquul ah in la tiriyo fursadahaaga in shaqo lagu helo Dubai. Dhamaantiis micnaheedu waa in ka badan-sare ah oo aan la yaab leh shaqooyinka Abu Dhabi. Halkaas waxaad ka yaabi kartaa magaalada casriga ah ee caanka ku ah bartamaha lamadegaanka. Laakiin tusaale ahaan, Waqti ku qaadashada Dubai ama Abu Dhabi oo aan shaqo helin wuxuu qeexi doonaa niyad-jab.
Shaqooyinka ku yaal Resource Resume
Qodob kale oo muhiim ah Shaqooyinka Dubai biimayn waa inaad lahaataa saaxib ku nool magaalada aadna u awoodi karto inuu kuu sharaxo sida loo maareeyo arjiga shaqada ee suuqa maxaliga ah. Dhinaca dhinaca wanaagsan waxaa ku jira Emirates 7 Aagga Magaalada Dubai. Fiiri waxbadan oo aan ahayn shaqo raadin Soojiidashada ayaa isku xira oo u dirta CV qorayaasha ku qoran Dubai. Si loo soo koobo waxa ay tahay inaad qirato, waa magaalo cajiib ah oo caqli galisay magaalada Heerka sarreeya Sheikh Mohammed bin Rashiid Al Maktoum halkaas oo aad ku noolaan lahayd nolol aad u raaxo leh! Oo aad email ugu dirto Heerkiisa.
Sidaa darteed wax yar oo ku saabsan magaalada Dubai iyo Sharjah. Xaqiiqdii, waxay ahayd degmo yar oo lamadegaanka ah oo keliya 50 sano ka hor oo halkaas ka soo baxday waxay noqotay magaalo teknolojiyad sare leh. Marka la soo koobo taasi waa a ganacsi iyo barta dhaqanka ee Bariga Dhexe ilaa Booqo Dubai oo ka raadso macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan inta ugu badan goobaha caanka ah ee dalxiiska iyo qorista ee 2018-2019. Sawirka ugu badan ee 1960s iyo 1970s, dhab ahaantii, waxaan jeclaan lahaa inaanu magaalada ku tusino sidii horumarinta degaanka: Kulanka xaafada ee Deira waxa uu hareereheeda ku hareeraysan yahay bac. Xitaa ma ogaan kartaa meeshan?
Deegaanka magaalada Dubai maaha kaliya goobta shaqo raadinta, meesha aadka u wanaagsan waxaa si fiican loogu yaqaan dukaamada raaxada gaar ahaan, jacaylka haweenka naqshad casri ah iyo jawi nololeed oo firfircoon. Amakaag Burj Khalifa, oo leh dhismeheeda ugu dheer ee '830m' ee adduunka, ayaa xukuma hawada sare ee cirka sare. Hanti Ma-guurto suuqa iyo dalxiiska ayaa dhaqaalaha u horseedaya heer sare. Sababtoo ah waxay u muuqataa inay ahaato mid weligeed ah horumarinta shaqooyinka iyo si fiican u bixisay magac shaqooyinka suuq-geynta magaalada Dubai hal-abuurnimo iyo mashruuc-kii ugu sareeyay ee mashaariicda fursado shaqo oo gudaha ah UAE WhatsApp.
Meelaha Magaalada Dubai waa mid u gaar ah mustaqbalka Dubai
Sidaa darteed Shirkadda Dubai City kaliya waxaan doonayay inaan la wadaago qaar ka mid ah xaqiiqooyin yaab leh oo ku saabsan codsiyada shaqada. Iyo sidoo kale macluumaadka dalxiis iyo sida loo faafiyo jacaylka yar ee Dubai ee magaaladan. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan Shaqooyinka beeraha iyo shirkadaha ugu sareeya. Sidaa darteed, fiiri adeegyadeena shirkadaha iyo qeybaha macluumaadka. Dhinaca kale, waa inaad sidoo kale fiirisaa shirkadaha shaqaalaynta. Careerjet waxay kireysteeysaa Dubai iyo Websaydka qorista Monster Gulf oo qaata murashax cusub. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Muuqaal cajiib ah Burj Al Arab
Hoteelka wuxuu isticmaalaa dahab ku filan si uu u daboolo Mona Lisa rinjiyeynta 46,265.
Aagga Magaalada Dubai waa mid cajiib ah iyo caddaynta ugu badan ee kufsiga waa gudaha gudaha Burj Al Carab. Hoteelkan waa mid caalami ah oo loo yaqaano Gaaritaanka Carabi. Marti-gelinta Carabta Shaqooyinka, haddii aad aadi doonto UAE markii ugu horeysay, waxay noqon kartaa wax yar oo khibrad badan leh. Qurux badan oo qurux badan oo qurux badan leh oo lagu qurxiyo wareegyada 1,790 ee wareegga xiga ee 24-carat. Iibso dahab ah, waxaad ku dabooli kartaa sawirada 46,265 Mona Lisa. Shaqooyinka hudheelka Burj Al Arab ee Dubai.
Hal ka mid ah walxaha 4 ee adduunka ayaa ku yaala magaalada Dubai
Aagga Magaalada Dubai ayaa wali sii kordhaya maalin kasta sida ugu dhakhsaha badan. Dubai City wuxuu leeyahay wax ka badan xannaanada dhismaha ee 32,000. Si dhakhso ah qiyaasta 24-28 boqolkiiba dhammaan kiriimyada waa oo ku yaala UAE.
From Burj Khalifa sidoo kale Jumeirah Beach
Si Dubai Marina. Jasiiradda Aduunka. Ku socota Dubai Shopping Fiesta. Dubai waxay leedahay dhamaanteed soo jiidashada dalxiisayaasha. Ma ogtahay in dhismaha jasiiradaha caleemo laga bilaabo 2001 iyo dhisto jasiiradaha Palm ee Dubai loo baahan yahay oo keliya 94 malyan mitir cubic oo cammaan ah? Taasi waxay ahayd wakhti si aad shaqo u hesho Shirkadaha magaalada Dubai. Jasiiradaha xayawaanku waxa ay ka samaysan yihiin ciid ka soo qulqulaya dhulka badda. Xaaladda badanaaba waa la iska indhatiray Palm Jumeirah waxaa laga sameeyey dherer 3,257,212,970.389 cagaha Imaaraadka Carabta sanduuqa ocean-vibro-isku-dhafan hal meel oo cajiib ah [source: Palm Jumeirah]. Gaar ahaan Vibro-compact wuxuu sii kordhiyaa cufnaanta ciidda dabacsan adigoo u diyaarsanaya jiirarka iyo isboortiska kale ee kale oo lagu xoojiyo dadka isticmaala caalamiga ah ee waalan. Ma ogtahay waxa aan ula jeedno taas?
Sheekooyinka ugu Qaalisan Dunida
Guud ahaanba ku saabsan Dubai Palm Jumeirah waxaa horay loo dhisay guryo qaali ah oo ku yaalla TOP OF RICHEST SHEIKHS ee dunida iyo huteelada oo buuxa dalxiisayaasha. Qaar ka mid ah iibsadaha hore waxay ka cabanayaan 2001-2017 in santuuqyada ay aad isugu dhow yihiin marka loo barbardhigo inay abuuraan.
Muddada dheer, iibsadaha caalamiga ah waa isku dhafka Europe, Australia, India, iyo USA maalgashi muddo dheer ah kuwaas oo kirada u bixiya dadka degan, kuwa fasaxa gala iyo kuwa rabaayada ah ee rajeynaya in ay lacag caddaan ah ku yeeshaan sicirka qiimaha Expo 2020 wuxuu bilaabi doonaa sidaas Ku soo celi CV-ga shirkadda Dubai.
Maalgashiga Dubai City ama Qatar
Markii jasiiraddu dhammaatay, Sheekh Nakheel ayaa filayay in 120,000 ilaa xaafadda 150,000. Xeeladaha caalamiga ah ee qaar ka mid ah Maalgashiga VC si ay u ogaadaan waxa ay dhab ahaantii ka raadsanayaan UAE iyo Qatar sida fursadda ganacsi ee la maalgeli karo ee UAE. Plus inta badan 20,000 illaa 30,000 dalxiisayaasha maalintii. Shaqaalaha dhismaha Hindiya wuxuu ku noolaa maraakiibta yar yar iyo maraakiibta xamuulka ah ee u dhow Aagga Magaalada Dubai iyadoo dhisaysa jasiiradan cajiibka ah. Dhismaha Boqortooyada Boqortimadu waa kaliya 37 million mitir cubic.
Booliska Dubai waxay leeyihiin hanti dheeraad ah
Qofka aad ka jeceshahay TV-ga. Sidaas waxaad fiirinaysaa gawaarida ciyaaraha ee Dubai Police hoosta. The Booliska Dubai Xooggu wuxuu leeyahay Supercars ka badan xitaa waad tirin kartaa. Hagaag, ogaada alaabooyinka ayaa jira wakhti dheer. Sawirka booliiska Dubai ayaa la dhigay qeybta baarkinka booliiska.
Ciidamada booliska magaalada Dubai tan iyo 2001 waxay isticmaashaa supercars si ay u soo jiito dalxiisayaasha adduunka oo dhan si ay u muujiyaan sida "mashquul" Aagga Magaalada Dubai runtii waa. Tan waxaa ka mid ah baabuur sida Mercedes Benz GL oo ka sarreysa 700 Horsepower - Audi R8 ($ 280,000) Ferrari FF ($ 500,000), Lamborghini Aventador ($ 397,000) iyo Aston Martin One-77 ($ 1.99 million). Dhanka kale, haddii aad jeclaan lahayd inaad la shaqeyso Mercedes Benz waxaad ka aqrisan kartaa waxbadan blog ku dhaji shirkaddayada.
Qiyaasta 80% ee dadka shaqo doonka ee Dubai ayaa ka yimid wadamo shisheeye
Sida lagu xusay in ku dhowaad 17 boqolkiiba Dadweynaha Dubai waxay ku dhasheen magaalada Dubai, halka boqolkiiba 83 kale ay yihiin qurbajoogta Hindiya, Pakistan, Europe, iyo waddamo kale. Inta badan shaqaalaha iyo kuwa cusub shaqo doonayaasha kuwaas oo raadinaya Shaqooyinka ka jira aagga magaalada Dubai shaqooyin ka helay ilaa iyo hada Shaqooyinka ka jira Dubai WhatsApp Kooxaha. Sababo la xiriira dhismaha Boqolaal kun oo dabaqyo ah oo ku bixiya magaalada 250,000 Dubai Shaqooyinka sanadkasta.
Dhanka kale, dadka ugu muhiimsan waxay ka soo guureen Hindiya, Pakistan, iyo Bangladesh ilaa Imaaraadka Carabta mushaharka wanaagsan. Dhammaanba, natiijada, kuwan dadka ajnebiga ah waxay noqdaan deganayaasha Imaatinka. Tan iyo 1995 waxay ka kooban yihiin 60% dadweynaha magaalada Dubai waana tan ka dhigeysa Dubai City runtii inay tahay magaalo caalami ah google shaqo doonka shaqo raadinta.
Dhab ahaantii Run ama Maya Dadka ku nool Dubai waa kuwo hodan ah?
Fasalka u dhaxeeya Emirates waa mid aad u weyn, oo leh qaar badan oo ka mid ah dadka ajaanibta ah oo raadinaya shaqooyinka Dubai maalin kasta. Guud ahaan, shaqaale heer hoose ah oo ku nool kuna shaqeeya mararka qaarkood 12h ilaa 16h maalin. Xaalado xun, qiimo jaban iyo cunida cuntada ka baxsan taariikhda cuntada. Iyadoo ay tahay in lagu dheelo dheelitir iyo u kaca sida Emiratis haysato kiro qaali ah, Waxbarashada carruurta iyo adeegyada gaarka ah ee dhakhaatiirta gaarka ah ayaa si dhakhso ah loo siiyaa fasalka iyo heerka sare ajnabiyaasha qaata mushaarka aadka ujecel.
Ma jirto cunto iyo hoy si aad u raadineyso Shaqooyinka magaalada Dubai
Sawir cajiib ah Sheekh Maxamed bin Rashid
Madaxwayne ku xigeenka iyo Ruler ee Dubai, iyo wiilkiisii ​​Sheikh Ham Hamdan, Boqorka Amiirka ee Dubai, wuxuu London ku qaataa Socdaalka Underground.
Sida iska cad aqlabiyad badan dadka magaalada Dubai City gaar ahaan dadka Hindiya iyo Pakistan. Ku noolow bil kasta illaa bisha oo sariirta la wadaagto si loo yareeyo qiimaha. Nasiib darro, dalxiisayaal badan oo dalxiisayaal ahi ma arkaan in ay booqdaan Dubai. Waqtigan xaadirka ah, dadka intooda ugu badan ee ku nool UAE waxay aaminsan yihiin waxyaabo waxay ka fiicnaan doonaan marka ay helaan shaqo ka fiican. Iyo haddii aad u aragto wanaag Shaqada Dubai waxay dhici doontaa.
Isticmaalka Maadada ama Magaca Baasaboorka Ingiriiska: Tube
Tusaale ahaan, haddii aanad gaariga isticmaalin oo aad go'aansato inaad qaadato Metro oo aad ku safraysid 99% waxaad arki doontaa farqi weyn. Labada xaaladood, haddii aanad samayn, urka ayaa kaa heli doona. Waxa ugu xun ee aad ku samayn karto UAE ?. Dadka socdaal si aad shaqo uga hesho Dubai oo ay leeyihiin dhaqaale xaddidan, lahayn guri, xiriir la'aan, wax sahlan. Isla markiiba, ikhtiyaarka ugu fiican ee ay ku lahaayeen dakhliga fudud, cuntada aasaasiga ah, iyo hoyga, laakiin ku noolaan hab xun.
Shaqooyinka Dubai - Booqo Dubai iyo bilaabista Xirfadaha UAE
La soco akhbaaraadka UAE
From Awoodiisa Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum
Ma Hogaaminaysaa Hogaamiyaha Magaalada Dubai ama Follower?
dabbaaldegidda ganacsatada sare/ bilawga gudaha UAE + World Carabta.
b. Abuurista wacyiga weyn ee muhiimadda ay leedahay Ganacsiga ganacsi ee Dubai Mall.
c. Ku dhiirigelinta macaamilada ganacsi inay ku wadaagaan sheekooyinka iyo hababka ugu fiican.
d. Suuq-suuq-galinta awoodaha dhaqdhaqaaqa UAE ee UAE shaqaale goboleedyo iyo caalami ah maalgashadayaasha.
e. Abuuritaanka dhaqanka hufnaanta, maamulka shirkadda, iyo wadaagista ugu fiican.
In 2018 Dhismayaasha Dubai waa la bedelayaa
Roobabka Dubai ayaa badalaya foosha carruurta ee sharci-darrada geela. Taasi waa warka wanaagsan ee Bariga Dhexe.
Illaa iyo hadda, Geela ku tartamaysa United Arab Emirates waa cayaar aad loo jecel yahay, oo la mid ah waxa ay kubada cagta Mareykanka iyo hockey u yihiin Canada. Marka la eego cabirka geela, kaliya caruurta ayaa kaqeyb gali kara tartamada. Halkii u oggolaanaya dadka deggan magaalada Dubai ' carruurta inay ka qayb qaataan. Dhibaato hore ayaa jirtay iyada oo carruurtu si sharcidarro ah u tahriibinayeen waddanka si geela loo kala saaro.
Mid ka mid ah qodobbada ugu fiican ee UAE waa bilaw shaqo iyo ku noolaanshaha Dubai.
Aagga Magaalada Dubai Lamborghini Huracán halkii geela
Maamulayaasha Deegaanka Dubai waxay had iyo jeer la yimaadaan fikrad fiican Si aad u muujiso Lamborghini Huracán LP 610-4 waa loola jeeday sidii loola dhaqmay Gallardo. Dunida inteeda kale waxay ugu dambeyntii ku qabatay arrin geel ah waxayna la timid fikrad cusub. Isku day inaad joojiso inta badan Imaaraadka.
Kharashka Lamborghini: $ 233,985 - $ 325,000 (qiyaastii)
Dawladda Dubai waxay la timid xalka Dubai. Robots ama kaliya Lambarghini. Qiimaha robotkaasi waa meel kasta oo ka timid $ 500 illaa $ 10,000. XADIIDKA FUEL EE 9.0 - 19.6 L / 100km. Iyo sidoo kale waxaad ka heli kartaa Hindiya Mumbai.
Dawlada Imaaraadka Carabta ayaa dhisaysa degaan cimil ah
Taasi waxay noqon doontaa wakhtiyo 1.50 ah oo ah xajmiga Paris. Taasi waa wax cajiib ah. Magaalada Dubai, waxaad ka heli kartaa jinsiyado badan, tusaale ahaan, Shaqaalaha Hindida iyo shaqaalaha Iiraaniyaanka.
Career 2020 ka hor bandhigga Dubai ayaa qorshaynaya in uu dhiso magaalada gebi ahaanta ee cimilada. Dubai City wuxuu noqon doonaa 3.95 km² oo leh cabbir hawo leh oo ku xiran meelo kala duwan oo ku yaala bartamaha magaalada Dubai. Paris, tusaale ahaan, wuxuu leeyahay degaan kaliya 1.02 km². Wixii macluumaad dheeri ah, waxaad ku daali kartaa google.
Aagga Magaalada Dubai ilaa 2018 ma laha cinwaanno muuqaal ah
Magaalada Dubai, ma jiro lambar sir ah ama xitaa xayndaab dhuleed oo aan lahayn lambaro boosto!
Sababtoo ah ayaa kor u qaaday qiimaha shaqo ee sii kordhaya ee Dubai. Suuqa shaqa qorista ee guurguura waa sii kordhayaa, ma laha nidaam caadi ah. Intii aad isku xiri lahayd wejiga wejiga Siyaabaha ugu fiican ee lagu soo geli karo qoraallada HR ee Dubai waa inay soo diraan casuumada internetka. Khadadka cinwaanka ma aha calaamad boosto, waxaa jira meel gaar ah oo khaas ah oo ajaanibta ajnabigaa ay sawiraan khariidad yar ama qoraan tilmaamo gaar ah. Kuwa kale si ay uga caawiyaan inay gaaraan meel ay ka mid yihiin: "Ka dib markaad ka gudubto xarunta dukaamaysiga cad, waa waddada labaad ee bidixda, albaabka gaduudan."
Tom 'Cruises' iyada oo loo marayo Dubai MI MINUMX
In majalaaba Dubai City oo ka baxsan mushahar soo jiidasho leh bil walba si aad u heshid xisaabtaada bangiga. Sidoo kale maaha inaad bixiso wixii canshuur dheeraad ah ee dakhliga dheeraadka ah markaad hesho ka dhig lacagtaada shirkadaha Dubai. Tani waxay soo jiidataa qaar ka mid ah xiddigaha sida Tom Cruise's kuwaas oo u imow Dubai. Iyadoo fikradda ah in la kaydiyo lacag aad u fiican (lacag la'aan bilaash ah Dubai) waqti aad u yar. Bogga xun ayaa sidoo kale aad u fudud in la isticmaalo dakhliga badan ee aad adagtahay in Dubai lagu sameeyo.
Aagga Magaalada Dubai: ka weyn nolosha
Mashruuca Expo 2020 Dubai waa in uu noqdaa mid si joogta ah u ah goobta ugu weyn ee Bariga Dhexe. And Expo waa inay ahaato mid u fiican wax walba. Imaaradaha Imaaraadka Carabta ayaa ah kuwa ugu raaxeysan adduunka. Ka fiican meel kasta oo kale ee dhulka. Magaalada Dubai waxay leedahay hudheelka ugu wanaagsan adduunka oo dhan waxaana ka mid ah Burj Al-Carab.
Dhismayaasha Dubai waa dhismaha ugu dheer aduunyada. Burj Khalifa waxa uu ku celceliyay in uu yahay hudhole qurux badan oo soo booqda No.1 ee qorista qorista Bariga Dhexe. Dhab ahaantii, Mashruuca Burj Khalifa waxaa laga arki karaa 95 km ka fog meesha aad ka taagan tahay.
Aagga Magaalada Dubai: Dhab ahaantii Jacaylka Imaaraadka
Dhinaca kale, Aagga Magaalada Dubai wuxuu ku yaalaa xarunta ugu weyn ee gudaha Bariga Dhexe, waxay sidoo kale leeyihiin awooda ugu weyn ee GCC. Munaasabadda ugu weyn ee is-gaadhsiinta ah ee ay samaysay bini-aadanka, hudheelka ugu dheer adduunka, shabakada tareenka ee ugu dheer ee Abu Dhabi. Iyo faankii ugu weynaa ee lagu ciyaaro garoonada gudaha ee gudaha magaalada Dubai. Sidoo kale shirkadeena, waxaad noqon kartaa Blogger ee Dubai oo qor wax ku saabsan Dubai cajiib ah.
Haddii aad waligaa hesho ikhtiyaarka booqasho ahaan asal ahaan ama dalxiis fadlan booqo magaaladan runta ah ee gaarka ah iyo kaliya Go oo aad aragto! Haddii aad ku dhawdahay Carab jecel ama haddii kale, Si kastaba ha ahaatee, Dubai waxay ka tagi doontaa aragti u gaar ah qof walba. Kooxdayada dhinaca kale, marwalba waxay kula talineysaa dadka shaqo doonka ah. Iyadoo maskaxda lagu hayo, waa inaad sidoo kale Ku dar CV-gaaga Naukri Gulf oo ah goob shaqo oo ku taal Dubai.
Dubai City Qorista qorista 2019
Resume Resume oo ah magaalada ugu dhaqsaha badan aduunka!
Waa hagaag, sidaanu u siineyno hagayaal fiican ee Shaqooyinka ee Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Sidaa darteed, arrintan maskaxda ku haysa, waxaad hadda bilaabi kartaa raadinta hagayaal, talooyin iyo shaqo ku yaal Imaaraadka Imaaraadka Carabta leh luqadaada.